Kufuneka i-vague ukwazisa ukuba ufuna aren khange rhoqo ndonwabe kwi-budlelwane, kodwa uzawukufumana zange lungelelanisa yakho union ukuba abe toxic. Kuba ngabo lucky ngokwaneleyo ukufumana entsha romanticcomment umdla emva toxic budlelwane, ke i ngokupheleleyo ezahlukeneyo amava. Nazi izinto ezimbalwa ukuba kunokwenzeka ukuba girls abo kuhlangana abantu abalungileyo emva kokudlula a engalunganga budlelwane. Ukuba umntu ufuna ngoko ke blindly yenziwe idlalwe nawe ngenye indlela wena ngaphambili wayecinga waba unimaginable. Emva kokuba ufumane ngaphandle ukuba onzulu cave, useza khetha ka-covering amehlo enu, ngenxa omtsha ukukhanya ke nje kancinci kakhulu oqaqambileyo. Nangona indlela izinto waphela, wena experienced a real uthando, apho ke kakhulu ngaphezu abantu abaninzi unako ukuthi iziqu zabo. Ngoko ke, musa t efumana kakhulu ukuya kwezi phezulu ngomhla zinto ukuba akukwazeki ukufumana umntu othile ukuze ngethuba nasemva koko. Layo s rare ukufumana real nto ngendlela yolwandle lizele somethings. Ingakumbi emva kokuba nje onayo ngaphandle yalonto ngoko ke ngamandla. Xa usenza izinto ngendlela budlelwane, wena musa t ukufumana mna-ixesha kufuneka ucinge izinto ixesha elithile. Layo s ingabi ngathi kufuneka yiya ngokupheleleyo kwi kwi emithini kwaye kuba hermit okanye nantoni na, ngolohlobo. Nje hamba phezu kwayo yakho intloko. Ngexesha lakho eks zazinokuba enye abo atshabalalisa budlelwane ekugqibeleni, nisolko mhlawumbi ngaphezu ngobukho eyakho iimpazamo. Mhlawumbi awuzange ukuba zithungelana iimfuno zakho ngokwaneleyo. Mhlawumbi awuzange t ukuba ngaba kufuneka. Ixesha elizayo ibe ngaphezu vocal malunga nabo. Ukususela yakho yangaphambili budlelwane phantse ukutshatyalaliswa wena (ugxininiso lwalo kwi-phantse), mhlawumbi nje ufuna ukuba ufuna ixesha elithile. Kwaye kanye ukuba ngaba kunokwenzeka, nje hlasi le senkunzi enye yi-horns. Betha ngaloo sketchy bartender kuwe ll mhlawumbi flake ngaphandle kwi, asazanga ukuba jikelele guy abo babekho questionably younger than kuwe. Wena musa t tyala kwabo nantoni na. Kuphela ngokwakho kuba bonke fun ufuna amadoda ngaphandle ngomhla phambi.
Akukho namnye unako umgwebi kwenu; kuba kubhaliwe ngenxa yokuba siyazi ufuna nje wahamba ngokusebenzisa esihogweni kwaye emva. Kwi toxic budlelwane, ingakumbi uphando nezinamandla, mhlawumbi kuba gotten osetyenziselwa umlingane wakho obsessing phezu kwenu ukuba kwinqaku ka-seeming uphambene. (Mhlawumbi ngenxa yokuba babebaninzi.) Uninzi eqhelekileyo bantu, nangona. Abekho, ngolohlobo. Bathabatha lula, ngoko ke musa t thinks yakho entsha enokwenzeka romance isn t anomdla. Savor inkululeko nisolko yokufumana. Yamkela insults kwaye yokufumana sukuyihoya.
Mihla ingaba phezu
Eneneni, yakho sixth evakalayo kuba slightest umqondiso a toxic budlelwane kufuneka ye-gradient phezulu ukuba kube ngonaphakade, kwenzeka ntoni kwakhona. Eyona nto yenza ukuba uyeke umntu ngaphambi koko kwi kwi-umdlalo kunokuba kamva. Ukuba indlela wena ll uphephe ukufumana nayiphi na ngaphezulu iqhotyoshelwe. Ngokuqinisekileyo, babe kwenzakalisa kuba mhla okanye ezimbini, kodwa ngeveki okanye ngoko ke, kamva kuwe ll kuba emva kwi kweenyawo zenu.
Phew, ezilungileyo riddance
Yonke into siza kuva ngumzekelo uluvo lwam, hayi i-fact. Yonke into siyabona yi imbono, hayi inyaniso.
Abantu abaninzi confuse ego uthando kunye inyaniso uthando ngenxa ufakelo ukuba umntu kusenokuba lula misunderstood njengoko uthando Ngakumbi Ingaba kokudlula a wokuqhawula umtshato kwaye bemangalisiwe ukuba uza ngonaphakade yima ndinovelwano ubuhlungu, ngoko ke overwhelmed yi-yonke loo nto ke njalo. Ngakumbi Uthando yenza ihlabathi shenxisa. Uthando lelona wafuna-emva oluntu amava. Kodwa paradox kukuba xa thina ngokwethu ingaba uthando, sihamba kwindlela ezama ngayo ngaphandle ngokwethu. Ngaphezulu Ulonwabo ufumana into ukuba ufunyenwe ngaphakathi ngokwakho. Ngaphakathi uxolo kwaye tranquility zibalulekile ukuba ufuna ukuphila a ndonwabe isempilweni ubomi. Musa kuba nzima kakhulu kwi ngokwakho, fumana iindlela zolile engqondweni yakho kwaye wawuphungula yakho anxiety kwaye depression. Ngonaphakade ukususela oko ndaqalisa yoga kwaye meditation yam yonke ubomi itshintshile kuba bhetele. Ndikuvayo clearer malunga apho ndise ubomi bam kwaye yintoni injongo yam
← Ividiyo Unxibelelwano. Izibhengezo, papasha kwaye unikezelo ka-iziphetshana kwi-Imola
Indlela reactivate i-metabolism - Ugq Fil wild ass live - YouTube →